सामसुङको ‘ग्यालेक्सी नोट नाइन’ सार्वजनिक, कस्ता छन् फिचर्स ? - Dainik Nepal
सामसुङको ‘ग्यालेक्सी नोट नाइन’ सार्वजनिक, कस्ता छन् फिचर्स ?
दैनिक नेपाल २०७५ साउन २५ गते १३:०४
काठमाडौं, २५ साउन । सामसुङ कम्पनीले ग्यालेक्सी नोट नाइन फ्याब्लेट बजारमा ल्याएको छ । कम्पनीले अमेरिकाको न्यूयोर्कमा एक समारोहकाबीच नोट नाइन सार्वजनिक गरेको हो ।
कम्पनीले यस मोबाइलमा विशेष फिचरहरु रहेको बताएको छ । नोट नाइनमा चार रङमा उपलब्ध हुनेछ । यसमा ६ जिबी र्‍याम हुनेछ जसले मोबाइललाई ह्याङ हुनबाट जोगाउँछ । त्यस्तै १२८ जिबी स्टोरेज छ । यसको बजार मूल्य ९९९.९९ डलर रहेको छ । कम्पनीले महंगो मोडलमा पनि नोट नाइन निकालेको छ । यसमा ८ जिबी र्‍याम र ५१२ जिबी स्टोरेज रहेको छ । यसको बजार मूल्य एक हजार २४९.९९ डलर रहेको छ ।
यसको लुक्स नोट एटसँग मिल्दोजुल्दो देखिएपनि डिजाइनमा भने फरक छ । नोट नाइन२.७ गिगाहर्जको ६४ बिट अक्टाकोर एक्जिनोस ९८१० प्रोसेसरबाट चल्छ । यही प्रोसेसर ग्यालेक्सी एस नाइन र नाइन प्लसमा पनि छ ।
कम्पनीका अनुसार नोट नाइन नोट एटभन्दा ३३ प्रतिशत फास्ट चल्छ । यसमा पानी भरिएको कार्बन फाइबर हिट पाइप समेत जडान गरिएको छ । जसले फोनलाई तात्नबाट जोगाउँछ । यस मोबाइल एन्ड्रोइड ८.१ ओरियो अपरेटिंग सिस्टमबाट चल्ने सामसुङ कम्पनीले जनाएको छ । सामसुङको बहुप्रतिक्षित नोट नाइनमा ६.४ इन्चको सुपर एमोलेड इन्फिनिटी डिस्प्ले रहेको छ ।
नोट नाइनको तौल मात्र २०१ ग्राम छ । ब्याट्रीमा चार हजार मिलि एम्पियर क्षमताको रहेको छ । यसमा प्रयोग भएको ब्याट्रीले फास्ट चार्जिङ प्रविधि पनि सपोर्ट गर्छ । मोबाइल पानी र धुलो प्रतिरोधी भएको बताइएको छ ।
मोबाइलमा मेन क्यामरा डुअल सेटअप रहेको छ भने जसमा १२ मेगापिक्सेल वाइट एंगल सेन्सरयुक्त क्यामेरा छ भने अर्को पनि १२ मेगापिक्सल टेलिफोटो सेन्सरयुक्त छ । नोट नाइनमा सेल्फी क्यामेरा ८ मेगापिक्सलको रहेको छ ।
नोट नाइन एस पेनमा एक महत्वपूर्ण प्रविधि राखिएको छ । एस पेनले चार्ज सकिएको सूचना दिन्छ । जुन चालिस सेकेण्डमा नै फूल चार्ज हुन्छ । एस पेनमा ब्लुतुथ फिचरमा पनि समावेश गरिएको छ ।